Ardayda cusub ee Jaamacadda Muqdisho Oo imtixaankii ogolaashaha u Fariisatay |
Ardayda cusub ee Jaamacadda Muqdisho Oo imtixaankii ogolaashaha u Fariisatay
Ardayda Jaamacadda Muqdisho oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ufariistay imtixaankii ogolaashaha ee sanad waxbarashadeedka 2017-2018 ee Jaamacadda Muqdisho.
Imtixaankan ayaa ka bilawday dhamaan xarumaha ay jaamacadu ku leedahay magaalada muqdisho iyadoo ardayda imtixaanka u fariisatay wajiyadooda laga dheehan karayay dadaal iyo diyaar garow ku aadan imtixaanka.
Diiwaanhayaha guud ee ee jaamacadda muqdisho Dr-Maxamed Xasan Nuur oo lahadlayay warbaahinta ayaa u mahadceliyay dhamaan ardayda ufadhida imtixaanka iyo waalidka soomaaliyeed kalsoonida ay siiyeen Jaamacadda muqdisho isagoo tilmaamay in kaalinta jaamacadda muqdisho ay leedahayna ee dhanka waxbarashada ay kasoo bixi doonto.
Imtixaankan waxuu soconayaa ilaa 5 cisho oo subax iyo galab. ah
Kuliyadaha imtixaanka loo galaya waa 9 kuliyadood oo ka kooban 34 taqasus.
Jaamacadda muqdisho oo kamid ah jaamacaddaha ugu faca wayn soomaaliya ayaa waxay kamid tahay jaamacadaha ugu horeeya qaarada Afrika waxayna xubno muhiim katahay ururo caalami ah iyadoo ardaydii jaamacadda wax kabartay hada ay ka shaqeeyaan dhamaan hay’adaha kala duwan ee dalka qaarkoodna ay daraasadaha sare iyo cilmi baarisba kawadaan jaamacadaha caalamka.